Zimbabwer nun visa-befreit | IMCOSA
Zimbabwer nun visa-befreit
Um den Zustrom von Zimbabwern in den Griff zu bekommen, können Südafrikas Nachbarn nun mit einem kostenlosen 90-Tages Visum ins Land reisen.
In an effort to reduce waves of Zimbabwean asylum seekers, South Africa announced on Monday that its neighbour's citizens can travel here on a free 90-day visitor's permit and apply to do casual work during their stay. Home Affairs Minister Nosiviwe Mapisa-Nqakula appeared with her two Zimbabwean counterparts to make the announcement.
Zimbabwe has two home affairs ministers under a power-sharing agreement implemented earlier this year to try to resolve the country's economic and political crises.
"We have a significant number of economic migrants from Zimbabwe," Mapisa-Nqakula said. South African officials have been overwhelmed by Zimbabweans, who apply for asylum at a rate of more than 8 000 a day, and they believe many will now opt for the visitor's permit.
Most asylum seekers are denied because the government believes most Zimbabweans are not fleeing out of fear or persecution, but to find work as their economy collapses.
Yesterday's announcement could be seen as an acknowledgement that the government does not expect the stream of Zimbabweans to slow soon, despite hopes raised by the power-sharing government formed by Zimbabwean President Robert Mugabe's Zanu-PF and the Movement for Democratic Change.
The political marriage by the rivals has been shaky - as illustrated by the appearance of two Zimbabwean home affairs ministers alongside Mapisa-Nqakula.
Yesterday, the Zanu-PF co-minister, Kembo Mohadi, insisted Zimbabwe had no political prisoners. Some Zimbabweans in South Africa have said they cannot return until political prisoners are freed.
Mohadi's MDC counterpart, Giles Mutsekwa, disagreed, saying party leaders were still negotiating on how to address the issue of political prisoners.
According to the United Nations, 83 percent of Zimbabweans live on less than $2 a day, and 7 million - more than half the population - receive food aid. Zimbabweans come to South Africa to earn money to send back to relatives, or to buy food and other necessities that have been scarce at home.
Human Rights Watch, among several international rights groups that have been pressing South Africa to ease restrictions on Zimbabwean immigration for humanitarian reasons, called the change as a "positive development."
But Tiseke Kasambala, a Johannesburg-based Zimbabwe expert for Human Rights Watch, said in an interview that the change needed to be widely advertised and thoroughly explained.
Human Rights Watch has complained that a directive issued by home affairs earlier this month to stop deporting Zimbabweans for six months has not been followed on the ground, in part because South African police are unaware of the new rules.